BALEKA KWISIQHELO (ISauna kunye neJacuzzi)
Jesenice, Středočeský kraj, Czechia
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguEliška
Relax kwaye wonwabe eli khaya lithandekayo kufutshane neziko lesixeko sasePrague. Ilula, intle kwaye iphumla kakhulu.
Indlu ibekwe kwindawo entle yokuhlala:
-Imizuzu engama-30 nge-UBER ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iVáclav Havel ePrague,
-Imizuzu engama-20 nge-UBER ukuya eWenceslas Square.
Amagumbi okulala, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala elinekhitshi libekwe kumgangatho wokuqala kwindlu esihlala kuyo (sihlala kumgangatho ophantsi). Umgangatho wokuqala ubucala ngokupheleleyo kwiindwendwe. Onke amagumbi kumgangatho wokuqala abucala ngokupheleleyo kwiindwendwe. I-Jacuzzi imi ngaphandle kwi-terrace ngaphandle kophahla-akukho nto ingcono kunokonwabela ukuphumla kwimozulu ebandayo :-).
I-Sauna ibekwe kwindawo yokuhlambela kumgangatho ophantsi wendlu, ukusetyenziswa kwayo kucelwe kwangaphambili.
I-jacuzzi kunye ne-sauna zibucala ngokupheleleyo kwiindwendwe ngexesha lokuhlala kwazo.
Iindwendwe zingasebenzisa umatshini wokuhlamba okanye isomisi ukuba kuyimfuneko ngokusekelwe kwisivumelwano sangaphambili.
Indawo yokuhlala ime kumgama ohambahambayo ukuya ePruhonicky park eyiNdawo yeLifa leMveli leHlabathi yeUNESCO kunye neCzech National Historic Landmark. Ipaki ngokwayo yeyona ndawo ibalulekileyo yembonakalo yomhlaba esemazantsi mpuma ePrague kunye nendawo ebalulekileyo yokwahluka kwezinto eziphilayo kule ndawo yelizwe.
Ukuba uyawathanda amanzi kunye nokuqubha ungandwendwela eyona paki enkulu yamanzi kuMbindi Yurophu esePruhonice, imizuzu eli-15 kuphela ngemoto. I-Aquapark ebizwa ngokuba yi-Aquapalace ibandakanya amabhotwe amathathu ajongana nakho konke ukuthanda.
Kufuphi nendawo yokuhlala kukho enye yezona ndawo zinkulu zokuthenga eCzech Republic ebizwa ngokuba yindawo yokuthenga iChodov. Udederhu lweevenkile lufikeleleka ngokulula kwindawo yokuhlala-imizuzu eli-10 ngemoto okanye imizuzu eli-15 ngezothutho zikawonke-wonke, indawo yokumisa ibhasi ikwisithuba esingaphantsi kwemizuzu emi-5 ukusuka endlwini.
Umbuki zindwendwe ngu- Eliška